fight - English to Shona Meaning of fight - http://shona.english-dictionary.help
English to Shona Meaning :: fight
Fight - kurwisana Fighter :: murwi Fighting :: kurwa Fights :: kurwa
vechikwata ichi vakaita mhirizhonga
achaita kuti ukunde
Remember this one? Spider-Man loses a big FIGHT...
English to Shona Dictionary: fight
Meaning and definitions of fight, translation in Shona language for fight with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fight in Shona and in English language.
What fight means in Shona, fight meaning in Shona, fight definition, examples and pronunciation of fight in Shona language.
Surgery (sejari) :: Patients were last night due to discuss plans to set up three separate doctors surgeries in Westbury Victim (nyakurwadziwa) :: If not and if some want to draw lots to choose a sacrificial victim may they force everyone to join in Graft (batanidza) :: It took several years before the legislation was drawn up and passed to put into effect a body that must tackle without fear or favour allegations of corruption mismanagement and graft Mortuary (mochari) :: Were not allowed to film coffins being offloaded at Dover Air Force Base where the national mortuary is Aftercare (aftercare) :: Thus motivation scores on admission to treatment are related significantly to entry into postprison aftercare
Elevator (erevheta) :: More and more people began filling in the elevator pressing April towards the back corner Eleven (gumi neimwe) :: It was five after eleven and she still hadnt shown Else (mumwe) :: he was somewhere else at the time Elsewhere (kumwewo) :: they were sent elsewhere Embarrass (nyadza) :: Max humiliates and embarrasses me all the time so I dont know this made me happy
Requisition (kukumbira) :: Got more requisitions for the captain to sign he replied Binomial (binomial) :: The original title of Proteus now changed because Miramax is doing a submarine story with the same title involves the naming of the Protea flower in 1735 when it was given its correct Latin binomial Vehement (inopisa) :: At the other end of the scale George Foreman remains the most vehement opponent of this whole enterprise Multitudinous (huru) :: Television may have conveyed the impression that Dianas multitudinous mourners spoke or rather sobbed for the whole of Britain
Verb :: kanyika, akaberekera, , kuzopfekenura kusimira, gujunura Meaning ::